कति हो तिम्रो विर्यको मुल्य ? सबै युवाहरुले एक पटक पढ्नै पर्ने - Muldhar Post
कति हो तिम्रो विर्यको मुल्य ? सबै युवाहरुले एक पटक पढ्नै पर्ने
मूलधार सम्वादाता २०७४, १२ मंसिर मंगलवार 2015 पटक हेरिएको
हेलो ! नमस्कार मिस । मैले पनि नरम स्वरमा नै नमस्कार फिर्ता गरे ।
अन्तत: बोल्यो – ‘हो म नै हो तिम्रो बाउ । म र देवयानी एक अर्कालाई प्रेम गथ्र्यौं । तर, मेरो घरमा छोराछोरी समेत थिए । देवयानी गर्भवती भएको थाहा पाए पछि मैले धेरै फकाएँ यो गर्भ फालौं भनेर । उनले मानिनन् । त्यसैले उनलाई र गाउँ छाडेर म भारत पुगें ।
उनले किन हो यसको पेट भनेर हल्ला गरिनछन् । झन्डै बाइस वर्षपछि नेपाल आएँ । आज उनी कहाँ छिन, कस्तो अवस्थामा छिन्, केही थाहा छैन । मैले त मेरा पुराना दिनहरु समेत भूलिसकेको थिएँ । मैले तिमीसँग एक दिन भेट होला भन्ने त सपनामा समेत सोचेको थिइन । मलाई माफ गर छोरी तिम्रो अभागी बाउलाई । के चाहन्छौ तिमी म त्यही गर्छु ।’
( महिला खबरबाट)